မုန့်လင်မယား လုပ်စားကြအောင် | Wutyee Food House
« ထိုင်းစတိုင် ကြက်အူချောင်းနှင့် သခွာသီးသုတ်
November 21, 2010 by chowutyee
အိမ်မှာ ပျော်ပျော်ပါးပါး လုပ်စားနိုင်အောင် မုန့်လင်မယား လုပ်နည်းလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ၀တ်ရည်အမေ ဗီယက်နမ်သွားလည် တုန်းလေ မုန့်လင်မယားဗန်းလေး ၀ယ်လာပေးတာမို့ လုပ်စားဖြစ်သွားတာပါ။ အိမ်မှာ လုပ်စားကြည့်တာ အရမ်းလည်း လွယ်ကူပြီ ဆိုင်ထက်တောင် ပိုစားကောင်းသေးတယ်.. တူတူ လုပ်စားကြည့်ရအောင်….
၁။ ဆန်မှုန့် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၈ဇွန်း
၂။ ကုလားပဲ(အစိမ်းမှုန့်) – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်းခွဲ
၃။ ရေ – လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး ၅လုံးစာ (မှတ်ချက်။ ။ ဆန့်မှုန့် ထည့်သည့် ပမာဏထပ် ရေကို ၂ဆထည့်ပေးရင် ရသည်)
၄။ ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်းခွဲ
၅။ သကြား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၆။ ဆိုဒါ – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ပုံ၁ပုံ
ရ။ ပဲပြုတ် – အနည်းငယ်
၈။ ကြက်သွန်မြိတ် – ၁စည်း (ပါးပါးလှီးထားပါ)
၉။ ကြက်ဥ(သို့)ငုန်းဥ – ခလောက်ပြီ (ကြိုက်နှစ်သက်လျှင် ထည့်နိုင်သည်)
၁၀။ နှမ်းထောင်း (နှမ်းနှင့် ဆားအနည်းငယ်ရောထောင်းထားပေးပါ)
မှတ်ချက်။ ။ ထိုင်းမုန့်လင်မယားတွင် အုန်းနို့နှင့်သကြား ပိုထည့်ပြီ ချိုစိမ့်လေး လုပ်စားနိုင်သည်။
၁။ ဇလုံတစ်ခုထဲသို့ ဆန့်မှုန့်၊ ကုလားပဲမှုန့်တို့ကို ရောမွှေလိုက်ပြီ ရေအနည်းငယ်ထည့်၍ ကုလားမှုန့်များ ပျော်သည်အထိ ရောနယ်ပေးပါ။
၂။ ပြီးလျှင် ခပ်ကျဲကျဲရအောင် ရေ(လက်ဖက်ရည် ပန်းကန်လုံး၅လုံးစာ)ထည့်ပြီ ရောမွှေလိုက်ပါ။
၃။ နောက်မှ ဆား၊သကြား၊ ဆိုဒါများထည့်ပြီ မုန့်နှစ်ရည် အပေါ့အငံ့တစ်ချက်မြည်းကြည့်လိုက်ပါ။
၄။ မုန့်ရည်သည် ပျစ်နေလျှင် ရေအနည်းငယ် ထပ်ထည့်ပေးပါ။
၅။ ပြီးလျှင် ၁နာရီလောက်ကြာအောင် မုန့်နှစ်ကို နုပ်ထားပေးပါ။
၆။ ပြီလျှင် မုန့်လင်မယားဗန်း ခွက်လေးတွေမှာ ဆီအနည်းငယ်ထည့်ပြီ မီးကို အသင့်တင့်ရုံသာ ထားထားပါ။ မီးသွေးဖိုနဲ့လုပ်လျှင် ပိုကောင်းသည်။ မီးမျှနေရန် လိုအပ်သည့်အတွက် မီးကို အသင့်တင့်သာ ထားပါ။
ရ။ ဆီပူလာလျှင် မုန့်နှစ်ရည်များကို ထည့် မုန့်လင်မယားဗန်း ခွက်လေးတွေထဲသို့ မုန့်နှစ်ရည် စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်းစာလေးများလိုက်ထည့်ပေးပါ။
၈။ နောက်မှ ကြက်ဥ(သို့) ငုန်းဥ၊ ပဲပြုတ်၊ ကြက်သွန်မြိတ်များကို ထည့်ပေးပါ။
၉။ မုန့်လင်မယား တစ်ဖက်ကျက်သွားလျှင် နောက်တစ်ဖက်ပေါ်သို့ သွားပေါင်းတင်ပေးပါ။ အညှိရောင်အနည်းငယ် သန်းသည်အထိ မုန့်လင်မယားကို ဘက်ပြောင်းလှည့် ကြော်ပေးပါ။
၁၀။ နှစ်ဖက်လုံး အရောင်ညီသွားလျှင် ပန်းကန်ထဲသို့ ပြန်ဆယ်ထားပါ။ ထို့အတိုင်း တခြား မုန့်လင်မယားများကို ထည့်ချက်သွားပါ။
၁၁။ နှမ်းထောင်းကြိုက်လျှင် အပေါ်မှ နှမ်းထောင်းလေးများကို ဖြူးပေးပြီ မုန့်လင်မယားကို အရသာရှိရှိ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ….
Posted in -မြန်မာ ချက်ပြုတ်နည်းများ | 33 Comments
on November 21, 2010 at 5:37 am | Reply နွေးနေခြည်
on November 22, 2010 at 3:28 am | Reply chowutyee
စားသွားပါ သူငယ်ချင်း။ နင်မင်္ဂလာဆောင်မှ ပြန်အစားကျွေးရမယ်.. ဟီးဟီး
on November 21, 2010 at 6:33 am | Reply Pearl Lin Phyu
မ၀တ်ရည်ရေ.. သိပ်ကြိုက်.. ကျေးဖူးအရမ်းတင်တာပဲ.. ရေမုန့်ဆိုရင် အဲဒီမုန့်နှစ်ကိုပဲ ကြက်သွန်မိတ်ရောပြီး အိုးထဲဖြန့်ထည့် ရတာလားဟင်.. အဆင်ပြေရင် ပြောပြပါနော်. နောက်ပြီး ဂဏန်းကော်ကြော်နည်းလေးလဲ သိရင် ကျေးဖူးပြုပြီး ပြောပြပါနော်..အဟီး. မေးတာလောဘကြီးနေပြီလားသိဘူးးး များနေပြီ.. ကျေးဖူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်.
on November 22, 2010 at 3:31 am | Reply chowutyee
ပုလဲရေ ရေမုန့်တော့ မလုပ်စားဖူးဘူး။ လုပ်စားဖြစ်ရင် ချက်နည်းလေးပါ တင်ပေးမယ်နော်။ ဂဏန်းကော်ကြော်တော့ မသိပေမယ့် တန်ပူရာ ဂဏန်းကြော် လုပ်စားဖူးတယ် ချက်နည်းကို ဒီဘလောက်မှာ တင်ထားတယ်… 😀
on November 21, 2010 at 8:30 am | Reply Sunny
on November 22, 2010 at 3:34 am | Reply chowutyee
Sunny ရေ ကျေးဇူးပဲနော်.. မုန့်လင်မယားကို အားပေးတဲ့သူ တော်တော်များတာပဲ၊ မုန့်လင်မယားရောင်းစားရင် ကိုက်လောက်ချည်းရဲ့… ဟီးဟီး နောက်တာပါ။ အားလုံးကို အလကားကျွေးမှာပါ… 😛
on November 21, 2010 at 11:12 am | Reply hmone gyi
pig yee yay i really wanna eat tooahint ahint 😥
ကိုယ်အတွက် မုန့်လင်မယားဗန်းလေး ကြုံရင် ၀ယ်ထားပေးမယ်.. လုပ်စားလို့ ရအောင်
on November 21, 2010 at 1:20 pm | Reply subuueain
အရမ်းကောင်းပါတယ် ဝတ်ရည်ရေ။ မျှဝေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါနော် 🙂
on November 22, 2010 at 3:35 am | Reply chowutyee
Ma Subuueain Thanks par naw… Plz try it!
on November 21, 2010 at 2:48 pm | Reply TTSweet
မုန့်လင်မယားတော့ကြိုက်ပါရဲ့။ အိုးကမရှိတော့ လုပ်ထားတာလေးပဲ သွားရေကျပြန်သွားပါတယ်။ ရှယ်ပေးတာ ကျေးဇူးနော်။
on November 22, 2010 at 3:36 am | Reply chowutyee
Really Thanks to TTSweet!!! 😀
on November 21, 2010 at 7:12 pm | Reply ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)
၀တ်ရည်ရဲ့ မုန့်လင်မယားက ချစ်စရာလေးတော်
on November 22, 2010 at 3:37 am | Reply chowutyee
မချော အတွက် အထူးပါဆယ်တစ်ပွဲ ပို့ပေးလိုက်မယ်နော်… 😛
on November 22, 2010 at 5:17 pm | Reply ကိုသားကြီး
ဝါးးးးးးးးး ။ စားချင်တယ်ဗျို့ ။ အကြိုက်ဆုံး အစားအစာပဲ ။ အဝတီးသွားပြီဗျို့။
on November 24, 2010 at 3:16 am | Reply chowutyee
ကိုသားကြီး အ၀စားသွားပါဗျို့.. ပါဆယ်နဲ့တစ်ပွဲပါ လေပျံနဲ့ ပို့ပေးလိုက်မယ်နော်.. 🙂
on November 23, 2010 at 8:39 pm | Reply phyu
ဆန်မှုန့်ကို အရည်ဖျော်ရင် ဆန်မှုန့်နဲ့ ရေနဲ့ရောမနေပဲ ကြာရင်အနည်ထိုင်သွားတယ်။
မှုန့်နှစ်လို ရောမနေပါ။ ဘယ်လိုဖျော်ရမလဲ ဆိုတာပြောပြပေးပါ။ ယိုးဒယားဆန်မှုန့်သုံးတာပါ။
on November 24, 2010 at 3:14 am | Reply chowutyee
phyu ရေ အရင်ဆုံး ဆန်မှုန့်နဲ့ ပဲစိမ်းမှုန့်ကို အရင်ရောမွှေလိုက်ပါ။ ပြီမှ ရေ(လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံးစာ) အနည်းငယ်ထည့်ပြီ မုန့်နုယ်သလို သမအောင် နုယ်လိုက်ပါ။ ပြီမှအလိုက်သင့် ရေနည်းနည်းခြင်းထိထည့်ပြီ ရောမွှေသွားပါ။ ကြာရင်တော့ အနည်ထိုင်မှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မုန့်လင်မယားလုပ်ခါနီးရင် ဇွန်းလေးနဲ့ မွှေမွှေပေးပြီမှ လောင်းထည့်လိုက်ပါ။ ၀တ်ရည်ကတော့ မွှေးတံဆိပ်(ဆန်စိမ်းမှုန့်)ကို သုံးတာပါ… 😀
on November 24, 2010 at 2:24 pm | Reply ဆောင်းနှင်းရွက်
အရမ်းကြိုက်တယ် .. .
အကြိုက်ဆုံး မုန့်ပဲ ..း)))
on December 7, 2010 at 4:59 am | Reply chowutyee
on November 26, 2010 at 2:26 am | Reply Nway Nway
Thank you so much for posting this page.. I have been looking for how to do that snacks which is my favorite..
on December 7, 2010 at 5:00 am | Reply chowutyee
နွေးနွေးရေ မုန့်လင်မယားက ထင်သလောက် လုပ်ရတာ မခက်ပဲ၊ အရမ်းလွယ်ပြီ စားလို့လည်းကောင်းတယ်.. ဗန်းသာ ရှိရင် နွေးနွေးလည်း လုပ်စားလို့ရပြီ… 😛
on December 16, 2010 at 7:11 am Nway Nway
Yes, sis. I did it on last week and it was really easy as you said. At first, i couldn’t make it because i put too much heat and less oil. Then next round I tried with medium heat and put more oil.. guess what I made it.. It was an excitement. Once again, thanks for posting.
If possible, would you mind posting how to cook ငါးရှဉ့်ခြောက်စပ် (in hotel style)? I really appreciated it.
on November 30, 2010 at 5:52 am | Reply Pearl Lin Phyu
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်… ခုတော့ မုန့်လင်မယားပဲ လုပ်စားလိုက်ဦးမယ်… 🙂
Thanks Pearl too.. plz try it!
on December 1, 2010 at 7:58 pm | Reply ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့)
မုန့်လင်မယား အရမ်းကြိုက်တယ်။ အဲဒီလုပ်နည်းကို အခုလို ဖော်ပြပေးတာ ကျေးဇူးနော်။ အကိုဆို ငယ်ငယ်တုန်းက မုန့်လင်မယားစားရင် နှစ်ချပ်ထပ်ထားတာကို မခွါဘဲ ဒီအတိုင်းဘဲ စားတယ်။ တစ်လွှာစီခွါပြီးမှ စားရင် ကိုယ့်အလှည့်ကျ ၀ဋ်လည်မှာ စိုးလို့။ တစ်ချို့က တစ်လွှာစီခွါစားကြတယ်လေ။ ညီမလုပ်ထားတာ မြင်တာနဲ့တင် တံတွေးမျိုချနေမိပြီ။ စားချင်နေတာ။
on December 7, 2010 at 5:01 am | Reply chowutyee
ဟားဟား ၀တ်ရည်လည်း ကိုကိုမောင် အတိုင်းပဲ ခွဲမစားဘူး ၀ဋ်လည်မှာ စိုးလို့။ အင်္ဂလန်ကို ပါဆယ်နဲ့ ပို့ပေးလိုက်မယ်နော်..
on January 1, 2011 at 9:41 am | Reply မုန့်လင်မယား « အိမ်ရှင်မရဲ့ဟင်းလက်ရာ
[…] ဒီလင့်လေးပါ Tags: မုန့်များနှင့်ပတ်သက်သော […]
on January 2, 2011 at 1:29 pm | Reply chowutyee
အိမ်ရှင်မရဲ့ ဟင်းလက်ရာကို ၀တ်ရည်လည်း အမြဲဝင်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်.. ကျေးဇူးပါ.. 🙂
on April 21, 2011 at 1:34 pm | Reply nayzar
စားလို့ အရမ်းကောင်းတယ် မမ.နောက်လည်း လာလည်မယ်နော်..
on August 3, 2011 at 2:57 pm | Reply Su Myat Nandar
I want to eat all ………..
fried pan ko bal mhar well lo. ya lae` hin……….ama ………;)
on August 10, 2011 at 8:47 am | Reply chowutyee
ုမုန့်လင်မယား ဗန်းကို သံဈေးမှာ ရောင်းတယ် ညီမ
on May 14, 2012 at 2:05 pm | Reply About: Cho Wut Yee
[…] November 21, 2010 မုန့်လင်မယား လုပ်စားကြအောင် […]